सन्दीपलाई अन्तिम बलमा विकेट! | Hamro Khelkud
सन्दीपलाई अन्तिम बलमा विकेट!
एजेन्सी – इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) को १६ औं खेलमा नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले सनराइजर्स हैदरावादविरुद्ध मध्यम मध्यम प्रर्दशन गरेका छन् । सन्दीपले ४ ओभरमा ३२ रन खर्चिदा १ विकेट लिए ।
सामान्य लक्ष्य दिएको दिल्लीले सन्दीपलाई पहिलो ओभरमै बलिङ ल्याएको थियो । ओपनर डेविड वार्नरलाई सुरुवाती तीन बल डट गराएका सन्दीपले चौथो बलमा १ रन दिए । पाँचौ बलमा जोनी बेयरस्टोले सन्दीपलाई चौका प्रहार गर्दै खाता खोले । अन्तिम बलमा १ रन खर्चिए ।
९ औं ओभरमा सन्दीपले ५ रन मात्र खर्चिए । पहिलो र दोस्रो बलमा विजय शंकरलाई डट गराएका सन्दीपले तेस्रो बलमा दुई रन खर्चिए । चौथो बलमा शंकले १ रन लिए । पाँचौ बल मनिष पान्डेलाई डट गराउँदा अन्तिम बलमा दुई रन दिए ।
सन्दीपले १६ औं ओभरमा ८ रन खर्चिदै १ विकेट लिए । यस ओभरको तेस्रो बलमा युसुफ पठानले चौका प्रहार गरेका थिए । अन्तिम बलमा दिपक हुड्डालाई कागीसो रबडाबाट १० रनमा क्याच आउट गराए । यो सँगै सन्दीपले आफ्नो चार ओभरको स्पले कोटा पनि सकाए ।